2 Arrimood Oo Ka Hortaga Cayilka Xad Dhaafka Ah - Daryeel Magazine
2 Arrimood Oo Ka Hortaga Cayilka Xad Dhaafka Ah
Saynisyahanno ka hawlgala Jaamacadda Washington ee dalka Maraykanka ayaa daraasad ay sameeyeen ku ogaaday in nasashadda iyo hurdadu ay baajiyaan cayilka buurnimada xad-dhaafka ah ee qofka la soo darista.
Darasaadda ay soo saareen kooxda saynisyahannada ah oo lagu daabacay jariidada la yidhaa The Sleep (hurdada), ayey ku shaaciyeen in hurdo la’aantu sababto buurnida xad-dhaafka ah iyo in qofku u naaxo si qayrul-xad ah, iyagoo khubaradu xusay in xaddiga hurdada caadiga ah ee la seexdo ay waqtigan casriga ah hoos u dhacday celcelis ahaan saacad iyo badh.
Waxyaabaha khubaradani ku qoreen wargayska ay daraasaddooda ku soo bandhigeen waxa ka mid ahaa; “Bulshada casriga ah ee dunida daafaheeda ku nool nolosha tiknoolajiyadda waxa soo waajahay dhibaatooyin jidh ahaaneed iyo nasfad ahaaneedba, caddayntuna waxay tilmaamaysaa in hurdada oo yaraataa ay sababto buurnida aan qayrul-caadiga ahayn.
Cilmi-baadhistani waxa intaas ku dartay in hurdo la’aantu saamayso culayska, taas oo si gaar ah u asiibta hormoonada jidhka iyo hab-dhiska koritaanka jidhka ee la yidhaa Metabolism Reaction.
Sannadkii hore saynisyahanno ka tirsan Jaamacadda Warkwick, ayaa sheegay in hurdo la’aantu dumarka u keento cudurka dhiig-karka, balse aanay saamayn ragga, iyadoo intaa raacisay in haweenka shan saacadood iyo wax ka yar seexdaa ay dhiig karka uga badan yihiin kuwa toddobada saacadood ee caadiga ah iska seexda.
Sidee Qofku Isaga Ilaalin Karaa Fakarka Xad-Dhaafka Ah
HAFZA: Cabitaan Cayilka Yareeya Jirkana Nadiifiya
4 Calaamadood Oo Ku Tusinaya Inaad U Baahan Tahay Hurdo Iyo Nasasho Badan
Ka Hortaga Cudurka Macaanka
Faham La’aanta Waalidka Ayaa Sababta in Ilmaha Cudurka Nafsiga Ahi Kusii Fogaado
Inta badan qoysasku kuma baraarugaan xanuunnada nafsiga ah ee carruurta ku dhaca, sababtuna waa iyaga …
English Articles	14 tips for a better marriage
April 3, 2017	In search of love
February 5, 2017	TOP RATED	15 Qodob Oo Nin Kasta Ka fisho Xaaskiisa